- नेपाली सन्देश शनिबार, कार्तिक २२, २०७७ , 10.1K जनाले हेर्नुभयो
कार्तिक २२ पोखरा । शनिबार अपरान्ह्र गण्डकी प्रदेशको कास्की सहित विभिन्न जिल्लाका थप दुई सय ४५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरा, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लाइफ केयर एण्ड डाइग्नोष्टिक प्रा.लि. पोखरामा गरिएको नमुना परिक्षणमा प्रदेशका ७ जिल्लाका थप दुई सय ४५ जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
शनिबार अपरान्ह ४ बजे सम्म निर्देशनालयले तीन चरणमा विज्ञप्ती जारी गर्दै यसको पुष्टि गराएको हो ।
निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा एक सय ७५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै गोरखामा ३० जना , तनहुँमा १५ जना , लमजुङमा १० जना , बाग्लुङमा ९ जना , स्याङजामा ४ जना र पर्वतमा २ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
निर्देशनालयले अपरान्ह्र ३ बजे पहिलो विज्ञप्ती माफर्त क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखराबाट एक सय ९१ जना, लगत्तै ३ ः३० मा दोस्रो विज्ञप्ती मार्फत पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको जनाएको थियो । जस मध्ये एक सय ४६ जना संक्रमित कास्कीका रहेको छन् ।
यस्तै, लाइफ केयर एण्ड डाइग्नोष्टिक प्रा.लि. पोखरामा गरिएको परिक्षणको विवरण अपरान्ह ४ बज जारी गर्दै ३ जिल्लाका थप ३१ जना संक्रमण देखिएको जनाइएको छ । जसमा पनि २९ जना संक्रमित कास्कीका रहेको छन् ।
यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ८ हजार ९ सय ८४ पुगेको छ ।